Agaasimaha NISA, Sheekh Shariif & Xasan Sheekh oo kulan xasaasi ah yeeshay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa xalay kulan xasaasi ah Magaalada Muqdisho ku yeeshay Taliyaha Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, kulankaas oo looga hadlay Arrimo xasaasi ah.
Ilo xog-ogaal ayaa ayaa Shabakadda Wararka Mareeg waxaa ay u sheegeen in kulanka diirada lagu saaray Arrimo la xiriira doorashada la filayo inay sanadka 2021 ka dhacdo Soomaaliya iyo Arrimo kale.
Warar kale oo soo baxaya ayaa waxaa ay sheegayaan in Taliyaha Hay’adda NISA iyo Madaxweynayaashii hore ay ka wada hadleen sidii loo dhameyn lahaa mad madowga soo kala dhex-galay Dowladda Federaalka iyo labada Mas’uul, iyada oo taliyaha NISA uu balan qaad u sameeyey.
Horay ayaa waxaa qadka taleefoonka ku wada hadlay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed,taas oo keentay in Taliyaha NISA Fahad Yaasiin iyo Madaxweynayaashii hore ay kulmaan,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in kulanka ay dalbadeen Madaxweynayaashii hore.
Dowladda Somalia oo Amaro dul-dhigtay Hay’ado ka howlgalla dalka